असार १४ को चुनाव सार्न राजपाको माग, सत्तारुढ दलद्वारा अस्वीकार
निशान न्युज जेष्ठ २७, 2074
प्रधानमन्त्री देउवा र राजपा नेताहरुबी...
जेष्ठ २७, 2074 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा का नेताहरुबीच भेटवार्ता सुरु भएको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संसोधन लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलका ल...
एकै परिवारको दुई छोरा अध्यक्षका उम्मे...
जेष्ठ २७, 2074 बैतडी, । बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकामा एकै परिवार बाट दुवै छोरा अध्यक्षमा उम्मेदवार उठेपछि घर को परिवारलाई भोट कस्लाई दिएर जिताउने भन्ने चिन्तामा छन् । भने उता करिब दुई दशकपछि आएको स्थानीय तहको निर्वाचनले खुसी तुल्याए पनि तुल्याएको छ । आफैँले जन्...
नयाँ दिल्लीमा देउवा स्वागतको तयारी
जेष्ठ २६, 2074 नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री देशबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि भारतले तयारी थालिसकेको दिल्ली पुगेका पत्रकार ऋषी धमलाले जनाएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा हुन गैरहे...
मधेशी मोर्चा फकाउदै प्रधानमन्त्री
जेष्ठ २६, 2074 काठमाडौं । २३ गते भारी मतले प्रधानमन्त्रीमा विजयी भएका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा आउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि संसदले बधाई दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मोर्...
वादी समुदायको पहिलो महिला उम्मेदवार
जेष्ठ २६, 2074 कैलाली, । वादी समुदायको पहिलो उम्मेदवारमा चन्द्रकुमारी उपप्रमुखमा निर्वाचन भएकी छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले २८ वर्षीय वादीलाई गोदावरी नगरपालिका–८ बाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको भ्रातृ सङ्गठन सङ्घीय मजदु...
निर्वाचनको मुखमा कन्चनपुर कांग्रेसलाई...
जेष्ठ २६, 2074 काठमाडौं । स्थानीय तहको अन्तर्गतको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टी त्यागेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर नै चल्ने गर्छ । यो पटक पनि त्यस्तै भइरहेको छ । पहिलो चरणमा लजास्पद हार वेहोर्दै तेस्रो बरियतामा रहेको म...
प्रधानमन्त्री देउवालाई आयो भुटानी शरण...
जेष्ठ २५, 2074 दमक, । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा पूर्वमा शरणागत भुटानीहरुले बधाई तथा शुभकामना पत्र पठाएका छन् । नेसनल रिकन्सिलेसन कमिटी भुटानले बधाई पत्र पठाउँदै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री द...
कांग्रेसभित्र पौडेल र सिटौलाको लफडा
जेष्ठ २५, 2074 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको दुई दिन पनि वितेको छैन । तर, उनलाई असफल बनाउन स्वयम् उनकै दलका नेताहरु लाग्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच २० मन्त्रालयमा सहमति बने...
प्रधानमन्त्री देउवाले लिए गोपनियताको ...
जेष्ठ २४, 2074 काठमाडौँ । नवनिर्मित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएकी हुन् । ...
माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराले ...
जेष्ठ २४, 2074
उपप्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका गोपालमान...
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार ग...
प्रधामनन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सात...
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ८ सदस्यीय म...
← अघिल्लो 12… 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 पछिल्लो →
अनसनरत डा. केसी र सरकारबीच मध्यराती ७ बुँदे भयो सहमति (सहमति पत्रसहित)
आज असोज १० गते शनिबार, शनिदेवको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ आजको राशीफल
धनकुटामा सुनीलबहादुर थापालाई लाग्यो झड्का, कुमार थापाले बनाए जम्बो जिल्ला कार्यसमिति
वैज्ञानिकहरु भन्छन्, कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचार गाँजा सेवनबाट हुनसक्छ
एउटै व्यक्ति १२ देशको राजदूत सिफारीस ! इतिहास रचे डा. निर्मल विश्वकर्माले
आज असोज २२ गते बिहीबार, विष्णु भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुस् यस्तो छ आजको राशीफल